Macallinka cusub ee Barcelona, Xavi Hernández oo labo xiddig ka doonaya Kooxda reer England ee Chelsea… (Booskee ayay ka ciyaaraan?) - Wardeeq 24 TV
Home Sports-ka Macallinka cusub ee Barcelona, Xavi Hernández oo labo xiddig ka doonaya Kooxda...
Macallinka cusub ee Barcelona, Xavi Hernández oo labo xiddig ka doonaya Kooxda reer England ee Chelsea… (Booskee ayay ka ciyaaraan?)
Tababaraha cusub ee Barcelona Xavi ayaa lagu soo warramayaa inuu doonayo inuu sanadka soo socda keeno garoonka Camp Nou daafacyada naadiga Chelsea Cesar Azpilicueta iyo Andreas Christensen.
Labadaan xiddig ayaa heshiisyadooda kooxda ka dhisan Magaalada London waxa ay ku eg yihiin dhammaadka xilli ciyaareedkan 2021-22, inkastoo warbixin dhawaan soo baxday lagu sheegay in Azpilicueta uu qarka u saaran yahay inuu qalinka ku duugo heshiis kordhin hal sano ah oo uu ku sii joogayo Blues.
Wadahalka heshiiska cusub ee Christensen ayaa u muuqda mid burburay, iyadoo kooxda heysata Champions League ay ku dhibtoonayaan inay heshiis la gaaraan xiddiga heerka caalami ee dalka Denmark.
Suxufiga Gerard Romero ayaa warinaya in Azpilicueta iyo Christensen labadoodaba loo arko bartilmaameedyada koowaad ee kooxda Barcelona, iyadoo labaddan daafac ay suurtagal tahay in lagu heli karo beeca xorta ah.
Barcelona ayaa qorshaynaysa inay firfircooni la soo baxdo inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee bisha Janaayo, laakiin waxa ay u baahan doontaa in ay hal abuur ku samayso suuqa, maadaama ay jirto dhibaato dhaqaale oo si joogto ah u haysata kooxda.
Kooxda reer Catalan ayaa sidoo kale la la xiriirinayay Weeraryahanka Chelsea ee Hakim Ziyech, iyadoo kooxdu ay dooneyso inay kor u qaaddo doorkeeda weerarkeeda qeybta labaad ee xilli ciyaareedka 2021-22, laakiin haatan waxa ay xooggeeda isugu geyn doontaa sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayd labadaan daafac.
Previous articleMiyuu Macallinka Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ka fikirayaa inuu Kabtannimada kooxda ka qaado Harry Maguire?
Next articleAl-Shabaab oo weerar ismiidaamin ah ku dilay wariye caan ka ahaa magaalada Muqdisho